Nanokafana ny fizarana arona akanjo ho an’ny mpianatra sy mpampianatra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Miisa 10 093 ireo arona akanjo ho zaraina amin’ny mpianatra manerana ny distrikan’ny Vohibato ary 1013 ny an’ireo mpampianatra. Nosantarina tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny EPP Talata Ampano izany tamin’ny Zoma 12 Febroary teo ity. Nanolotra izany ny lehiben’ny fari-piadidiana amin’ny fampianarana ato Matsiatra Ambony, notronin’ireo manam-pahefana samihafa. Nandritr’ity fotoana ity no niarahaban’ny Solombavambahoaka ny vahoaka ao Vohibato tratry ny taona vaovao ka ho taonan’ny fandrosoana, fifandeferana, firaisankina, fihavanana anie ity taona ity hoy izy. « Aoka ny rehetra hiara-kiasa amiko hampandry fahalemana ny distrika ity. Mambole fa avy ny orana izao, indrindra ny hazo ; izaho dia hanafatra zanakazo hovolentsika hialana amin’ny hain-tany lava ity ary hofaizina mafy izay mbola minia mandoro tanety eo.» Raha ny lafiny fampianarana dia hanana EPP manara-penitra 2 ny distrikan’i Vohibato ary 20 hafa hamboarin’ny FID (Fond d’Intervention pour le Développement). Raha ny hita moa dia antitra tanteraka ny EPP ao Talata Ampano ao. Nambaran’ny lehiben’ny faripiadidiana amin’ny fampianarana ato Matsiatra Ambony fa amin’ny talata heriny ho avy izao no hisy dinika hamoahana ireo mpampianatra ho raisina mpiasam-panjakana ao Vohibato. Hisy ihany koa ato ho ato ny lamina hanafoanana ilay tambin-karama 0 ariary mampikaikaika ny mpampianatra io.
Nasian’i Kolonely Randrianatoavina Jean Martin teny koa ny hetsika ataon’ny mpanohitra ny fitondrana ankehitriny. « Manaova asa fampandrosoana ianareo fa aza be resaka manakorontana saim-bahoaka, miasa koa mba ho hitanay sy azo tsapain-tanana izany ary ianareo solombavambahoaka namana dia aza tia tena na mitetika hanongam-panjakana izany fa miovà ; aoka hampianareo ny filoham-pirenena.» Nampitandrina izy fa tsy handefitra amin’ireo izay mikasa hitarika fanakorontanana ao amin’ny distrikan’i Vohibato.
Ankoatr’izay dia nambarany fa tsy mahalala afa-tsy ny hampandroso an’i Vohibato izy ka hanao izay ezaka hahatongavana amin’izany. Amin’ny lafin’ny fahasalamana dia henony fa misy fitakiana vola amin’ny marary ataon’ireo mpitsabo ka mampitandrina izay manao izany izy satria ny vahoaka efa sahirana. Ao Talata Ampano moa dia fantatra fa manjaka ny tazo mahery ka efa nisy olona namoy ny ainy mihitsy. Nangataka ny ben’ny tanàna ao an-toerana ny mba hanamboarana ny tetezana ao Andoharanofotsy amin’ny volan’ny CLD manaraka eo satria miantoka ny famoaham-bokatra ao anivon’ny kaominina io làlana io. Marihina fa tara herintaona ity kaominina ity amin’ny fampandrosoana hoy ny ben’ny tanàna satria vao haingana no nivoaka ny anaran’ny ben’ny tanàna noho olana ara-pifidianana.
(TTF. Tsara ny fampitan-kafatra na izany aza resaka politika dia mila miezaka ny mpanao politika mba tsy hitondra izany eny antokontanin’ny EPP, eo amin’ny kilonga. Fampianarana no atao any, tsy mialon-jafy ary mampitambatra. Ny politika na avy amin’ny mpanohana ny mpitondra na avy amin’ny mpanohitra dia mampizara hatrany)